RIKOODH: Julian Nagelsmann Oo Rikoodh Aan Dunida Ka Dhicin Loogu Diiwaangeliyey Guushii RB Leipzig Ka Gaadhay Atletico Madrid - Gool24.Net
RIKOODH: Julian Nagelsmann Oo Rikoodh Aan Dunida Ka Dhicin Loogu Diiwaangeliyey Guushii RB Leipzig Ka Gaadhay Atletico Madrid
August 14, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Tababaraha kooxda kubadda cagta RB Leipzig ee Julian Nagelsmann waxa uu xalay wacdaro ku dhigay Atletico Madrid oo uu ka reebtay tartanka Champions League, iyagoo iska xaadiriyey wareegga semi-finalka markii ugu horreysay taariikhda.
Leipzig oo la aasaasay sannadkii 2009, waxay awood u yeelatay inay dhulka la dhacdo Atletico, ayna ka gaadho guul ay u qalmaysay iyagoo kaga adkaaday 2-1, waxaana mahadda guushan iska leh Tyler Adam oo daqiiqaddii 88aad goolka taariikhda ay ku gashay u dhaliyey RB Leipzig.
Atletico Madrid oo laba jeer gaadhay finalka Champions League lixdii sannadood ee u dambeeyey, waxay la hoyatay guul-darro aanay filaynin oo kaga timid naadi 11 sannadood oo kaliya jira, isla markaana hore usoo garaacay Tottenham.
Tababare Julian Nagelsmann ayaa garoonka ku dhex-damaashaaday, isaga oo dhigay rikoodh aan wali ka dhicin tartanka Champions League.
Tababarahan oo 33 jir noqday bishii July ee sannadkii hore, waxa uu dhashay sannadkii 1987kii, xilligaas oo uu Diego Simeone ahaa ciyaartoy magac leh.
Taariikhda loo diiwaangeliyey Julian Nagelsmann ayaa ah inuu noqday tababarihii ugu da’da yaraa ee abid u gudba semi-inalka tartanka Champions League, waxaanu rikoodhkan ku galay in 33 sannadood isaga oo jira uu kooxdiisa geeyey semi-finalka.
Rikoodhka kale waxa samaysay kooxdiisa oo noqotay naadigii ugu da’da yaraa ee iska xaadiriya semi-finalka, waxaanay kooxdani jirtaa 11 sannadood oo kaliya.